PCLinuxOS 2017.03, mutsva iso mufananidzo weakagadzikana kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
PCLinuxOS 2017.03, mutsva iso mufananidzo kune wakanyanya kugadzikana
Mazuva ano tiri kuwana yakati wandei nhau kubva mukuparadzira kuburitsa mitsva ISO mifananidzo. Izvi zvinodaro nekuti ivo vari kutenderedza kugovera kwekuburitsa uko kunopota kuburitsa ISO mifananidzo yekuisa nyowani
Mune ino kesi tagamuchira nhau dzemufananidzo mutsva weIO kubva kuchikwata chePCLinuxOS. Mune ino kesi, iyo ISO mufananidzo inonzi PCLinuxOS 2017.03, mufananidzo unounganidza nhau dzichangoburwa mukuparadzira, kunyangwe mune ino kesi isu tiri kutaura nezve akanyatsogadzikana mapakeji uye zvirongwa.
PCLinuxOS 2017.03 inouya ne kernel 4.9.13, Imwe yeshanduro dzekupedzisira dzakagadzikana pamberi pekusunungurwa kwe4.10 kernel. KDE Plasma inosanganisirwa seyakagadzika desktop uye mune ino kesi LTS bazi rePlasma richiri kushandiswa, ndiko kuti, Plasma 5.8.6. KDE Aplications iripowo mune iyo ISO chifananidzo, mune ino kesi tiri kutaura nezve 16.12.2, imwe yazvino vhezheni.
PCLinuxOS 2017.03 inouya neazvino Linux kernel
PCLinuxOS 2017.03 zvakare ine zvimwe zvinoshandiswa zvisina hukama neiyo KDE chirongwa chakadai NixNote, dombo reEvernote; Dropbox kana GParted mutengi. Uye zvave kusanganisirawo dzimwe shanduko mumashandisirwo akakosha ekuvandudza kana kugadzirisa iwo. Pakati peichi chinjo ndidzo shanduko dzinoshandiswa kuKonsole, iyo system terminal uye iyo NetworkManager shanduko kune zvirinani network manejimendi.
Sezvo nekumwe kuburitswa kwekuburitswa kwekuburitswa, kana iwe uchitova nePCLinux OS yakaiswa, iwe unofanira kungoita mhanya iyo yekuvandudza chirongwa kuitira kuti komputa yako gamuchira shanduko idzi dzese. Kana, kune rimwe divi, iwe uchida kuyedza kugovera uku kana iwe uchingoda kuiisa pane komputa nyowani, iwe unofanirwa kutora iyo yekumisikidza ISO mufananidzo kubva Iyi link.
Ikoko iwe unowana iyo yepamutemo vhezheni iwe yaunogona gadza pane ese ari maviri 64-bit uye 32-bit michina. Ini pachangu, ndinofunga kuti PCLinuxOS 2017.03 inogadzikana uye yakakurudzirwa imwe nzira kune avo vasiri kutsvaga shanduko huru, kunyangwe kana iwe uchitsvaga KDE kupfuura PCLinuxOS, inogona kunge isiri yako kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PCLinuxOS 2017.03, mutsva iso mufananidzo kune wakanyanya kugadzikana
Tsitsi kuti ndeye kde, zvikasadaro yaizopenda zvakanaka
Pindura kuna Einar
Hongu ndeye KDE uye yakanakira ini. Ichave zvakare ichikurumidza pane yekare Hardware kweanenge makore maviri. Zvakaipa vanosiya iyo 2-bit vhezheni.
PCLinuxOS inotora mukana wakazara we KDE ichiri yakagadzikana uye iri nyore kuisa nekushandisa. Ndakaedza "ane mukurumbira" uye hapana kana mumwe akaakunda.
BlackArch Linux ikozvino ine itsva ISO mufananidzo wekurodha pasi